अज्ञात पात्रसितको रहस्यमय जम्काभेट – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ चैत्र २१, शनिबार १२:३२ गते
एउटा बेग्लै देश र फरक भूगोलबाट नेपालको चितवन, ज्योतिनगरमा भएको हाम्रो बसोबास नितान्त नौलो त थियो, साथै सम्भावित सम्बन्धका नयाँ अनुहारहरु पनि आत्मीय हुँदै थिए । ती धेरै अनुहारहरुमध्येका केही प्रतिनिधि अनुहारहरु थिए– शालिग्राम पौडेल, लालुप्रसाद पौडेल, जमानसिँ गुरूङ, मनहर्क सापकोटा, मानन्धर बाबा, सूर्यनाथ घिमिरे, काजीमानसिं गुरूङ, क्याप्टेन मनकाजी गुरूङ, घनश्याम अधिकारी, नरपति अधिकारी, सिरूबारे हबलदार, विष्णुप्रसाद सुवेदी, कृष्णकान्त अधिकारी, विष्णुप्रसाद गौली, नन्दबहादुर गुरूङ, लाहुरे बा आदि आदि । यहाँ उल्लेख गरिएका भन्दा कैयन धेरै नामहरु पनि हाम्रा आत्मीय र सहयोगीजनहरु थिए । सबैलाई उल्लेख गर्न ठूलै फेरहिस्त आवश्यक पर्ने भएकाले क्षमा—याचना गर्दछु । मंगलमान श्रेष्ठ र ठाकुरप्रसाद रेग्मी त झन् नजिकका सहयोगी भएका थिए । हरेक दुःखसुखमा यी दुई परिवारले हामीलाई ठूलो मद्दत र साथ दिए । यी दुई परिवारबाट प्राप्त मद्दत र साथ कतै विस्मृत भयो भने मेरो आफ्नै निम्ति पनि ठूलो अन्याय हुनेछ भन्ने लाग्दछ ।
ठाकुरप्रसाद रेग्मीको मध्यस्थताबाट नै मेरो वैवाहिक जीवनको थालनी भयो । पूर्वी चितवन चैनपुर निवासी गोविन्दराज अधिकारीकी कान्छी छोरी मञ्जु अधिकारीसँग विसं २०४१ साल माघ २५ गते मेरो लगनगाँठो जोडियो । म २१ वर्षको केटो थिएँ । सपनाको संसार थियो मेरो । विभिन्न थरीका रङ्गीन सपनाहरुले मेरो जीवनलाई ऊर्जा प्रदान गर्दथे । तीमध्येका धेरै कतिपय सपनाहरुले साकार रुप पाउनै नसक्दा अस्ताउँथे र आफैँ बिलाउँथे ।
जीवनको धेरै समय त मैले चिन्तन–मननमै खर्च गराएँ भन्ने लाग्दछ । मेरो जीवनका दुई अलग पाटाहरु थिए । तीमध्येको दार्शनिक जीवनको मेरो पाटो, जो असाध्यै मीठो र सुन्दर हुने गर्दथ्यो, मलाई निःशुल्क उपलब्ध थियो ‘जीवन–दर्शन’को यो उपहार । मौरीहरुले टाढा—टाढाका फूल–बगानहरु डुलेर जम्मा गर्न सकेका महले भरिएका घारहरुजस्तै ती मीठा सपनाहरुले मेरो अन्तरहृदयमा पनि धेरै आशाहरु जम्मा गराउँथे । हरेक अप्ठेराहरुलाई समाधानको बाटोमा डो¥याउन मेरो मस्तिष्कको दार्शनिक ऊर्जा हरसमय सफल थियो ।
उच्च इच्छाशक्ति भरिएको व्यक्ति विशेषको हृदयलाई कुनै आँधी र तुफानले छेक्न सक्दैन’ भन्ने यो सन्दर्भले मलाई सधैँ साथ दिइरह्यो । यस्तै, अरु साहसिक व्यक्ति आदिका जीवनी र उनीहरुले भोग्नु परेका घटना, तिनका चुनौती सामना गर्न उनीहरुले लगाएको मेहनत र बल मेरा साथीहरुझैँ थिए । म यस्तैयस्तै उच्च श्रेणीका विषय आदिहरुबाट सधैँ प्रभावित भैरहेँ । खोलाको किनारमा बिनामेहनत जम्मा गरिएको बटुवाको साथमा रहेका एक झोला हीराका टुक्राहरुझैँ पर्याप्त पहिचान र जानकारीसमेत नहुँदा कति हुत्तिए र मेरा हातमा ती कति जोगिए, त्यो मेरो जीवनको बाँकी समयले पुष्टि गर्ला ।
फ्रान्स देशको एउटा गरिब परिवारमा जन्मिएको नेपोलियन बोनापार्ट झिनो रकम बुझ्न समर्थ गरिब बाउको गरिब छोरो थियो, तर उसमा रहेको अदम्य साहस र उत्साहको कथाले मेरो जीवनका हरकदमहरुलाई बलियोमात्रै बनाएनन्, बरू आफ्नो कार्य र लक्ष्यमा निश्चिन्त र निरन्तर हुनसमेत खुब जोड लगाए । जागिरे बाउको साथमा बस्न गएको नेपोलियनले धनीमानीहरु मात्रै पढ्न पाउने स्कुलमा आर्मीको छोरो भएकै कारणले पनि भाग्यवश भर्ना हुन पाएको थियो । त्यस स्कुलमा त्यहाँका पढ्न आउने धनी बाउआमाका छोराछोरीहरुले उसलाई असाध्यै हेप्थे र पीडा पु¥याउने गर्दथे । बेलाबखत शिक्षकशिक्षिकाहरुबाट पनि ऊ अपहेलित हुनुपर्दथ्यो । उसले समयको मूल्य जान्दथ्यो । आफ्नो खाने कुरा आफैँ बनाउनुपथ्र्यो । परिस्थितिले आमाबाट टाढा हुनु परेको नेपोलियनलाई आमाको बहुत याद भइरहन्थ्यो । आमालाई उसले यसरी पत्र लेखेको थियो ः
‘आमा ! म तपाईंको छोरो नेपोलियनले यो पत्रमार्फत तपाईंको सम्झना गर्दैछु । म पढ्ने स्कुलका मेरा गुरूहरु र विद्यार्थी साथीहरुले मेरो आर्थिक विपन्नताका कारण मलाई खुबै हेप्ने गर्दछन् । तिनीहरु स्कुल आउँदा निकै महँगा खाजा, खानेकुराहरु लिएर आउँछन् । मसँग पैसा पनि हुँदैन र त्यस्ता महँगा खाजा आदि पनि हुँदैनन् । त्यसैले पनि म उनीहरुबाट अपहेलित भएको हुँला । आमा ! मैले दिनरात कठोर मेहनत गरिरहेको छु । भोजनका निम्ति दुई छाक जोहो गर्नसमेत मसँग समय पुग्दैन । त्यसैले, एक छाक भोजनमै चित्त बुझाउने गरेको छु । तर आमा ! निश्चिन्त हुनुहोस् कि मसँगभन्दा बढी थोक उनीहरुसँग केही छ भने ‘धन’ छ । त्यसबाहेक सबै मसँग बढी छ ।’ पछि त्यही गरिब बाउको गरिब छोरो ‘नेपोलियन’ फ्रान्सको सम्राट हुन सक्यो । रोमाञ्चक जीवनी र व्यक्ति विशेषका यस्ता अभूतपूर्व सफलताका कथाहरुले मलाई खुबै बलियो बनाउँथे ।
सत्र वर्षे कलिलो उमेरमा शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मैले आफ्नो वैयक्तिक दायित्व पूरा गरेरमात्रै फुर्सद पाउँदैनथेँ । मेरो पछाडि ठूलो परिवारको जिम्मा थियो । मेरो भरोसामा चेलाहरु भएर आउने विद्यार्थीहरुको जमात हुन्थ्यो । त्यसैले चुनौतीहरु स्वाभाविकै धेरै थिए । इन्टरमिडिएट लेभलको परीक्षामा सफल भएको थिएँ । एकपछि अर्को सफलताले दिँदै गरेको साथ र उपलब्धिले कतिपय अवस्थामा मन फुरूङ्ग भएर आउँथ्यो । जिन्दगी पनि एउटा ‘बन्जी–खेल’जस्तै रहेछ भन्ने ठान्दछु । सगरमाथाको उचाइ छुन तम्सिएका अभ्यासी पाइलाहरुजस्तै हुँदो हो, सबैको जीवनयात्रा भन्ने पनि लाग्छ ।
वैवाहिक जीवनको डेढ वर्षपछिको एक रात । अबेला ससुराली गाउँ चैनपुरतर्फ पुग्न भनी नारायणघाट बजारबाट बस पक्रिएको थिएँ । विभिन्न प्राविधिक उलझनहरु देखाउँदै मर्मतसम्भारमै लामो समय खर्चिएको म चढेको बसले यात्रालाई झनै अबेला बनाइदियो । बस चढेर चितवनको पर्सासम्ममात्रै पुग्न सकिन्थ्यो । पर्सा बजारबाट करिब ३० मिनेटको धानखेतको बाटो हिँडेर लदरी खोलो हुँदै बल्ल मेरो ससुराली गाउँ चैनपुर आउँथ्यो ।
माघ महिनाको कालो रात थियो त्यो । मन कमाउने जाडो सहन कठिन थियो । बसभित्रका प्रायः सबै यात्रुहरु जाडोको सामना गर्न दाँत किट्दै थिए । पर्साबजार आउनेबित्तिकै गाडी रोकियो । म पनि ओर्लिएँ । सँगै ओर्लिने अरु यात्रु साथीहरु कोही थिएनन् । पसलहरु सबैजसो बन्द भइसकेका थिए । मन्द उज्यालोमा मलिनो अनुहार देखाउँदै केही सडक बत्तीहरु भने टिमटिमाउँदै थिए । गाडीबाट ओर्लिनासाथै मैले उत्तरतर्फको ‘धानखेतको’ बाटोतर्फ सोझिनुपर्दथ्यो । लदरी खोलो आउनुअगाडि कतै कसैका कुनै घरहरु थिएनन् । निर्जनभैmँ लाग्ने धानखेतको बाटो । चुक पोखिएको अँध्यारो रात । झ्याउँकिरीहरुको अलाप ।
मेरा केही पाइलाहरु बढ्नैमात्रै के आँटेका थिए, एउटा बडेमाको अग्लो मान्छे सेतो परिधानमा मेरै अगाडि भएर हिँड्न सुरू ग¥यो । मेरा आँखाहरुले यस्तो दृश्य देख्नासाथै शरीर चिसो भएको मैले अनुभूति गर्न सकेँ । मुटु सम्भवतः केही सेकेन्ड त बन्द नै भयो भन्ने लाग्दछ । म ‘गुहार’ बोल्न चाहन्थेँ तर सुनिदिने कोही थिएनन् । पछाडि फर्किएर बेतोडले भाग्न पनि चाहन्थेँ तर भाग्ने कुनै ठाउँ थिएन । त्यसैले, साहसपूर्वक मुठ्ठी कसेर परिस्थितिको मूकदर्शक हुनु मेरो भागमा आइपरेको थियो । कुनै किसिमका भूतप्रेत, किचकन्या र छलीहरुबाट भाग्न हुँदैन, भाग्न थालियो भने सजिलै तिनीहरुले मार्न सक्दछन् भन्ने बाल उमेरमा मैले मेरा अभिभावकहरुबाट सञ्चय गरेका सुझाव आदिहरुले पनि मलाई भाग्नबाट रोके ।
म अगाडितर्फ बढ्दै गरेँ । हृदयको गति बिस्तारै सामान्य हुँदै पनि आयो । सेतो परिधानधारी अग्लो मान्छे पनि बिस्तारै मेरो अगाडि सर्दै गयो । उसका खुट्टाहरु चलेका थिएनन् । ऊ केवल हावाको लहरसँगै अघिअघि सरेको थियो । स्थिर तलाउको पानीमाथि डुङ्गा अगाडि बढेजस्तै थियो, उसको पयरको गति गजब थियो । म एकैजना थिएँ ‘दर्शक’ । ऊ एकैजना थियो ‘खेलाडी’ । ऊ मलाई के गर्न चाहँदै थियो पत्तो थिएन । उसको त्यसप्रकारको रबैयासँग मैले कसरी जुध्नुपर्ने हो ? मसँग कुनै आधार र प्रतिकार गर्ने क्षमता थिएन । त्यस अमुक वस्तु र मबीचको यो एउटा अन्योल लाग्दो जम्काभेट थियो ।
उसको शरीरको आकार बिस्तारै घट्दै आयो । केही मिनेटपछि उसले म भएतिर फर्किएर हे¥यो । म यससमय सुरूआती जम्काभेटझैँ लुलो र हलुङ्गो थिइनँ । लडभिड गर्ने त मेरो संस्कारमै पनि थिएन र मैले त्यसरी सोचिनँ पनि, तर उससँग सामना गर्न प्रचुर धैर्यता भने मभित्र जम्मा भइसकेको थियो । उसले शालीनतापूर्वक मतर्फ हेर्दै भन्यो– ‘तपाईं अगाडि हिँड्नुहोस् ।’ उसले बाटो छोडेर उभियो । ऊ मलाई अगाडि लगाएर मेरो पछाडि हिँड्ने ताकमा थियो । म अगाडि हिँड्न निकै इन्कार गरेँ । ऊ र मबीच केही सेकेन्ड भनाभन पनि भयो । उसले नमानिसकेपछि म बाध्य भएर अगाडि हिँड्न मन्जुर भएँ । मेरो मनभित्र एउटा त्रास सवार भएको थियो । यो पक्कै कुनै अतृप्त आत्मा हुनुपर्छ भन्ने तरङ्ग बारम्बार मभित्र चलिरह्यो । हिँड्दै गर्दा पटकपटक पछाडि फर्किएर उसको चालामाला हेर्दै पनि गरेँ ।
‘तपाईं कहाँ जाने हो दाइ ?’— मैले सोधेँ ?
‘गोडसोर’– उसले उत्तर दियो । गोडसोर लदरी खोलो तरिसकेपछि आउने दायाँतर्फको एउटा गाउँ थियो ।
‘ए हामी जाने बाटो त एउटै रहेछ, है दाइ !’– मैले भनेँ ।
उसको जबाफ थियो– ‘हो, हामी जाने बाटो एउटै हो ।’
यसरी मसँग दोहोरो बोलीचाली गर्ने ऊ सामान्य मान्छेजस्तै पनि लाग्थ्यो, तर विश्वास गरिहाल्न सकेको थिइनँ । मनभित्र भय र त्रासको ठूलै आँधी चलेको भएता पनि साहसपूर्वक उससँग मुख खोलेँ, “मलाई भूतप्रेतमा कुनै विश्वास छैन । तर, मान्छेहरु गैँडाको कुरा गर्छन् । त्यसैले, गैँडासँग सचेत छु ।’ मेरो कुरा सुन्नासाथै नम्र स्वरले ऊ बोल्यो– ‘गैँंडाको पनि खासै डर छैन ।’
हामी हिँड्दै गर्दा कुनै निश्चित बाटो थिएन । खेतका आलीहरु हुँदै ठाउँठाउँमा जमेको पानीका रहहरुमा छप्लाङ्छुप्लुङ् टेक्दै हामी दुई अपरिचित यात्रुहरु अन्योलताको बाटो हिँड्दै थियौैँ । केही २० मिनटजतिको पैदलयात्रापछि लदरी खोलो आइपुग्नै लागेको थियो । उसले पुनः नम्र स्वरमा अनुरोध ग¥यो, ‘तपाईं खोलापारि जानुहोस् । म एकैछिनको काम सकेरमात्रै आउँछु ।’ यो विषय उदेक लाग्दो थियो । त्यहाँ कोही थिएनन् । कुनै घर र मान्छेहरु थिएनन् । उसको काम के हुन सक्थ्यो र ! मलाई लाग्यो, सायद ऊ शौच गर्ने विचारमा थियो होला ।
मैले उससँग अझ नम्रतापूर्वक आग्रह गरेँ, ‘म तपाईंसँगै जान्छु । केहीछिन पर्खिन सक्छु, तपाईंलाई । केही मिनटहरु पर्खिएँ पनि । लामो समय पर्खिंदै गर्दा पट्यार लाग्न थालेको थियो । ‘ए दाइ !…. ए दाइ !….’ भनेर चर्को चर्को स्वरमा त्यसलाई बोलाएँ, तर ऊ त्यहाँ भए÷नभएको कुनै संकेत थिएन । मसँग एक्लै लदरी खोलो तर्नुको अब विकल्प बाँकी रहेन । त्यस मध्यरातमा भएको यो यात्रालाई मेरो साहसले मलाई हिँडाएको थियो, अथवा मैभित्रको कमजोरीले ममाथि अनावश्यक बोझ लदाएको थियो भन्ने विषय अवश्य पनि विचारणीय छ ।
मैले धेरै बौद्धिक जमात, आध्यात्मिक चिन्तक र मनोचिकित्सकहरुसँग समेत यस विषयमा विभिन्न छलफल र प्रसङ्गहरु चलाउँदै आएको छु । उनीहरु सबै आफ्नो व्यवसाय धर्म, अध्ययन र विषयअनुसारको मीठो तर्क दिन सक्षम छन् । ती सबै तर्क र सुझावहरुप्रति मेरो कुनै गुनासो र नकारात्मक टिप्पणी भने छैन । त्यो मेरो नितान्त निजी जीवनको त्यस अमुक वस्तुसँगको जम्काभेट अवश्य पनि थियो । शेक्सपियर रचित ‘दी टु जेन्टलमेन अफ भेरोना’ले भनेजस्तै ‘सानो ठाउँमा सत्य साबित भएको विषय विस्तृत ठाउँमा असत्य हुन पनि सक्छ र विस्तृत ठाउँमा सत्य भएको विषय सानो ठाउँमा असत्य हुन पनि सक्छ’ भन्ने सन्दर्भझैँ मनमा विभिन्न कोणहरुबाट कुरा चलाउने गरेको छु । यस किसिमको अप्रत्याशित जम्काभेट न अघिका कुनै दिन भएको थियो, न त्यसपछि नै ।